Izilwanyana kunye Nendalo Iikiti kunye neeMite
Iimpawu kunye neempawu zeMite kunye neTikiti
Uthando oluninzi lu lahleka kwizinambuzane kunye neengxube zeli hlabathi. Uninzi lwabantu luyazi into encinane ngabo, ngaphandle kweyonto yokuba ezinye zihambisa izifo. Igama lomyalelo, u-Acari, livela kwigama lesiGrike elithi Akari , elithetha into encinci. Zingaba ziincinci, kodwa izilwanyana kunye neengqikembe zinefuthe elikhulu kwihlabathi lethu.
Izilwanyana ezininzi kunye neengxube zi-ectoparasites zezinye izinto eziphilayo, ngelixa ezinye zixhoba kwezinye i-arthropods.
Kanti abanye bayondla kwizityalo, okanye baqhekeza umcimbi wezinto ezinjengobumba beqabunga. Kukho izilwanyana ezinobumba. Thatha nje umhlaba wehlathi kunye nokuwuhlola ngaphantsi kwe-microscope, kwaye unokufumana iindidi eziliqela zeentlobo. Ezinye ziyi-vectors ze-bacteria okanye ezinye izifo ezibangelwa zizifo, ezibangela ukuba zixhalabise kakhulu kwimpilo yoluntu. Amalungu omyalelo we-Acari ahlukeneyo, azininzi, kwaye ngamanye amaxesha kubalulekile kwezoqoqosho, nangona siyazi ngokuncinci malunga nabo.
Uninzi lwezilwanyana kunye neengqayi zinemizimba enemizi-oval, kunye nemimandla yomzimba emibini (prosoma kunye ne-opisthosoma) engabonakala ifana kunye. I-Acari yincinci, ininzi ilinganisa i-millimeter nje ubude, nje ngabantu abadala. Iikiti kunye nezibungu zihamba ngezigaba ezine zokuhamba komzimba: iqanda, i-larva, i-nymph, kunye nabantu abadala. Njengazo zonke i- arachnids , zineemilenze ezili- 8 xa zikhula, kodwa kwinqanaba elincinci, ezininzi zinemilenze emi-6 kuphela. Ezi zilwanyana ezincinane zihlala zihlakazeka ngokukhwela kwezinye izilwanyana eziphathekayo, ukuziphatha okubizwa ngokuba yi- phoresy .
Indawo kunye nokuSasazwa:
Izibindi kunye neengqayi zihlala malunga nendawo yonke eMhlabeni, kwiindawo zomhlaba zomhlaba kunye namanzi. Bahlala malunga nantoni na ukuba ezinye izilwanyana zihlala, kubandakanywa nezidleke kunye nezigubhu, kwaye zininzi kumhlaba kunye neengqabunga zamagqabi. Nangona iindidi ezingama-48,000 zezibungu kunye neengqayi zichazwe, inani lenani lezityalo kwi-Acari lingaba lixesha elininzi.
Iintlobo ezingaphezu kwama-5,000 zihlala e-US naseChanada kuphela.
Amaqela kunye neNqununu:
Umyalelo we-Acari awuyinto engaqhelekanga, ngokuba ikwahlula kuqala kumaqela, kwaye kwakhona kwii-suborders.
I-Opilioacariformes yeqela - Ezi zilwanyana zibukeka ngendlela efana nabavuni abancinane kwifom, benemilenze ende kunye nemizimba yesikhumba. Bahlala phantsi kweenkunkuma okanye amatye, kwaye banokuba ngabaxhamli be-omdavorous okanye abamnivorous.
Iqela lePasasitiformes - Ezi ziphakathi kwezibindi ezininzi ezingabinxalenye yamathambo. Baphefumula ngenxa yemigudu ehamba ngamabini. Amaninzi amanqaku kweli qela ahamba ngamagciwane.
Iimpawu zeCacarformes - Ezi zilwanyana ezincinci nazo zinezinxalenye zesisu. Xa ama-spiracles ekhona, ahlala kufuphi nomlomo.
I-Borror ne-DeLong's Introduction kwi-Study of Insects , i-7th edition, nguCharles A. Triplehorn kunye noNorman F. Johnson.
Isikhokelo soMhlaba weNNF kwiiNtshontsho kunye neNkathazo yaseMntla Melika , ngo-Arthur V. Evans
I-Internet yase-Latin America kunye ne-Entomology , nguCharles Leonard Hogue
Isingeniso kwi-Acari, iYunivesithi yaseCalifornia yeMbali yePaleontology. Kufumaneka ngoFebruwari 26, 2013.
I-Arachnida: i-Acari, ukunikezelwa kweklasi kwiSebe le-University of Minnesota kwi-Entomology Department. Ifumaneka kwi-intanethi ngoFebruwari 26, 2013.
I-Arthropod yeSizwe, iNkonzo yeSizwe yokuLondolozwa kweeNkonzo. Kufumaneka ngoFebruwari 26, 2013.
Ngaba zikhona izilwanyana ezinobuncwane kwiMatress yami kunye ne-Pillow?
Iingcebiso ezili-10 zokuPhepha ukuBhikishwa kweSikiti
Ziziphi Iimpawu Ezifanelekileyo?
Ngaba uReiki ukhuselekileyo kumfazi okhulelweyo?
Iintlobo ezi-5 eziPhakamileyo zeDiploma zesikolo
Izikhokelo zokusebenzisa iMakethi yokuQeqesha ngokuchanekileyo
Indlela yokudlala ifayile yeBhola engcono